Iichickpeas zityhutyhe imifuno | Ukupheka kweKhitshi
Iichickpeas zisiwe ngesosi yepepile
Molweni mantombazana! Namhlanje ndikuzisele indlela esempilweni kakhulu yokutya ukutya okumnandi Iichickpeas ezihanjisiweyo. Sisoloko sinxibelelana negama elithi chickpea ukuya kwisitshixo njengoko likwenza utyebe. Ewe, loo mbono uyikhuphe entlokweni yakho, kuba zininzi iiresiphi ezisempilweni ezinee-chickpeas: i-chickpea salads, ii-chickpeas ezikhutshwe ngemifuno, iisuphu, i-purees, njl.
El intshontsho, ukuba yimidumba kufuneka siyifake kuyo ukutya kwethu. Kodwa ayikutyebisi ukutya uqobo, kodwa into esiyibeka kuyo. Le mbotyi isinika ifayibha, iprotein kunye nezakha mzimba kunye neepesenti ezimbalwa zamafutha. Ke ngoko kuyacetyiswa kukutya okulungeleyo ukuqhina kunye nokutya okusempilweni kwentliziyo.
1 enkulu ebomvu yentsimbi.
1 enkulu eluhlaza yentsimbi.
1 itswele eliphakathi.
Iigloves ezi-5 zegalikhi
Izilayi ezimbalwa zesonka esidala.
1 icephe lepepile emnandi.
I-1/2 ithebhulethi ye-avecrem yemifuno.
I-drizzle yetamatato eyosiweyo.
Ngaphambi kokuba uqale ukulungiselela iresiphi yezi Iichickpeas ezihanjisiweyoSiza kutyikitya ii-chickpeas kubusuku obudlulileyo, ukuze iququzelele inkqubo yokupheka kwaye ingahlali inzima. Emva kobo busuku, siya kuzisusa ii-chickpeas ezidadayo okanye ezinembonakalo embi. Okulandelayo, siya kubazisa kwisipheki soxinzelelo esigutyungelwe ngamanzi, kwaye siya kusisa emlilweni kangange-45 min-1h.
Ngexesha elifanayo elipheka amantshontsho, senza i isofrito. Ukwenza oku, kufuneka sisike itswele, iipepile kunye nee-clove ezi-2 zegalikhi kwizikwere ezincinci kakhulu. Zibeke epanini enemvelaphi elungileyo yeoyile yeoyile, kwaye uyigaye de sibone ukuba yonke into yenziwe kakuhle. Xa oku kusenzeka, sidibanisa ii-chickpeas.
Kwelinye icala, kwelinye ipani, Qhotsa ii-clove ezi-3 ezisele kunye nesonka esidala. Xa zigolide, siyongeza kwiglasi yokuxuba okanye kudaka. Emva koko, kwi-oyile efanayo sidibanisa icephe lepeprika emnandi kwaye siyisose kangangemizuzu embalwa (kuya kufuneka ulilumkele eli nyathelo, kuba ipaprika inokutsha), emva koko uyongeze kwiglasi yokuxuba okanye kudaka, kwaye senza uhlobo intle, yeyiphi, esiyongeza kwipani yokutshiza kunye namantshontsho.
Ngoku ekubeni sinazo zonke izithako ngokudibeneyo, sidibanisa iziqholoityuwa, i-thyme, ipepile kunye nesiqingatha sepilisi ye-avecrem. Songeza kancinci umhluzi we-chickpea kunye nejet elungileyo yetumato eyosiweyo. Singayivumela ipheke malunga nemizuzu eli-15 kwaye yiyo yonke loo nto! Ndiyathemba niyazonwabela.
Iinkcukacha ezithe xaxe - Inyama yenkomo kunye ne-chickpea puree
Ukutya, Iiresiphi ezisempilweni
Umendo opheleleyo kwinqaku: yokuqalisa » Iiresiphi ezikhethekileyo » Ukutya » Iichickpeas zisiwe ngesosi yepepile